Hezekile 26 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
26 Kwathi ke ngonyaka weshumi elinanye, ngowokuqala umhla enyangeni leyo, kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi: 2 “Nyana womntu, ngenxa yokuba iTire+ ithe ngeYerusalem,+ ‘Heke! Zaphukile,+ iingcango zezizwana!+ Ngokuqinisekileyo utyekelo luya kuba ngakum. Ndiya kuzaliswa—yona iphanzisiwe,’+ 3 ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Yabona, ndinxamnye nawe, Tire, yaye ndiza kukunyusela iintlanga ezininzi,+ kanye njengoko ulwandle lunyusa amaza alo.+ 4 Kwaye ngokuqinisekileyo ziya kuzonakalisa iindonga zaseTire+ zize zizidilize iinqaba zayo,+ yaye ndiza kulukhothulula uthuli lwayo kuyo ndize ndiyenze ikhazimle, phezu komkhuthuka wengxondorha. 5 Iya kuba yindawo yokomisa iminatha+ erhuqwayo phakathi kolwandle.’+ “‘Kuba mna ndithethile,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova, ‘kwaye iya kuphangwa ziintlanga. 6 Needolophu eziphantsi kwayo ezisendle—ziya kubulawa ngekrele, bazi ukuba ndinguYehova.’+ 7 “‘Kuba itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Yabona, iTire ndiyizisela uNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni evela ngasemntla,+ ukumkani wookumkani,+ enamahashe+ neenqwelo zokulwa+ namajoni akhwele emahasheni nebandla,+ yona kanye inkitha yesizwana. 8 Iidolophu eziphantsi kwakho uya kuzibulala ngekrele, yaye uya kwenza udonga lokukungqinga+ aze amise umsele wokukungqinga akuphakamisele ikhaka elikhulu; 9 negalelo loomatshini bakhe bokuhlasela uya kulithumela ezindongeni zakho, neenqaba zakho uya kuzidiliza, ngamakrele akhe. 10 Ngenxa yenkitha yamahashe akhe uthuli lwawo luya kukugubungela.+ Ngenxa yesandi sejoni elikhwele ehasheni nevili nenqwelo yokulwa iindonga zakho ziya kunyikima, xa engena ngamasango akho, njengasekungeneni esixekweni ngeentanda ezivulekileyo. 11 Ngeempuphu zamanqina amahashe akhe uya kuzinyathela zonke izitrato zakho.+ Abantu bakho uya kubabulala ngekrele, neentsika zakho zokomelela ziya kuwela emhlabeni. 12 Yaye ngokuqinisekileyo baya kubuthabatha njengexhoba ubuncwane+ baze baziphange iimpahla zakho zentengiso,+ bazichithe ke iindonga zakho, nezindlu zakho ezinqwenelekayo bazidilize. Baya kuwatshonisa emanzini amatye akho, nezinto zakho ezinziwe ngomthi, nothuli lwakho.’ 13 “‘Kwaye ndiza kuyiyekisa ingxokozelo yokuvuma kwakho,+ nesandi seehadi zakho asiyi kuphinda sivakale.+ 14 Yaye ndiza kukwenza ukhazimle, phezu komkhuthuka wengxondorha.+ Uya kuba yindawo yokumisa iminatha erhuqwayo.+ Akusayi kuze ubuye wakhiwe; kuba mna, Yehova, ndithethile,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.+ 15 “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi kwiTire, ‘Ngenxa yesandi sokuwa kwakho, ekugcumeni kongxwelerhekileyo, ekubulaweni ngogonyamelo phakathi kwakho, aziyi kunyikima na iziqithi?+ 16 Ngokuqinisekileyo ziya kuhla ezitroneni zazo+ zonke izikhulu zolwandle zize+ zisuse izambatho zazo ezingenamikhono, zizihlube izambatho zazo ezilukiweyo. Ziya kwambatha ukungcangcazela. Ziya kuhlala phantsi emhlabeni,+ kwaye ngokuqinisekileyo ziya kungcangcazela ngalo lonke ixesha+ zize zikujonge zithe manga. 17 Ziya kukuphakamisela isimbonono+ zithi kuwe: “‘“Hayi indlela otshabalele ngayo, wena wawufudula umiwe ngabeelwandle,+ sixeko sidunyiswayo, esathi saba sesomeleleyo elwandle,+ sona nabo bangabemi baso, ababenkwantyisa abemi bomhlaba! 18 Ngoku iziqithi ziya kungcangcazela ngemini yokuwa kwakho. Neziqithi eziselwandle zimele ziphazamiseke ngenxa yokuphuma kwakho.”’+ 19 “Kuba itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Xa ndikwenza isixeko esiphanzisiweyo, njengezixeko okunene ezingenabemi, xa ndikunyusela amanzi anzongonzongo, namanzi amaninzi eya kukugubungela,+ 20 kanjalo ndiza kukuhlisa nabo behlayo baye emhadini kubantu bakudala,+ yaye ndiza kukubangela uhlale elizweni lasemazantsi,+ njengeendawo eziphanzileyo kangangexesha elide, kunye nabo behlayo baye emhadini,+ ukuze ungabi nabemi; yaye ndiza kubeka umhombiso elizweni labaphilayo.+ 21 “‘Ndokwenza ube sisikhwankqiso,+ ungabikho; bakufune,+ bangabi sakufumana ukusa kwixesha elingenammiselo,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova.”